Dubbe iyo Doolaal duqay weeye magaalo oo dalkooda ilaasha. By Geeljire
Doolaal:Waar miyaanad maanta salaaddii ciidda iman kugumaan arage?
Dubbe:Mayee waanigii imi inkasta oo aan yara habsaamay. Laakiin maxaa inaga raacay dee; sheekheenii wanaagsanaa ee Adan Siiro wuu maqnaaye.
Doolaal:Muu maqanayn ee waakii ina tukiyay ee khudbadda inoo jeediyay.
Dubbe:’ar meel kalaad malaa tagtaye sheekhii ma joogin ee biyahaa soo riix hadda.
Doolaal:Allaylehe adigaa meel kale tegey.
Dubbe:’aar beryahaaba waanu ku qarinaynay ee gurigaagaad ka ambataaye biyaha na sii dee.
Doolaal:’aar ma iminkaad sheekhii aanu shanta tallaabo u j irnayna nagula murmaysaa ee aanu indhahiisa wiilkooda arkaynay dhowaan daraadeed.
Dubbe:Wallah? Dee haddaa malaa sameecad meel kale laga soo duway baa ii dhoweyd. Mid baasoo i ag fadhiyayna waa igu raacay isna. Nin kale ayaan anigu khudbaddiisii dhegeystay hadaa.
Doolaal: “soo bax baa la leeyahay oo ay sacabka leefaysaa.? kumaad dhegeysatay waaba isagii baanu ku leenahay.
Dubbe:Ma ninkii siyaasadda ka hadlayay ee lahaa saddex nin oo indho la’ baa isku keen haysta iyo isbedel doonka iyo waxaa ka hadlayay baa sheekheeni mujaahidka ahaa wanaagsanaa ahaa? Dee waanu ahayn?
Doolaal:Weger. Iska wado laguu tag heli maayee. Yaad dhegeysatay haddaa?
Dubbe:Anigu waxaan dhegeystay Professor As-hari,ninkii sheegan jiray guddoomiyaha Isbedel doonka Subeyr Awal. Ilaahay ha ka aqbalee sheekhu Xajkii buu tegey baa la yidhi.
Doolaal:Wallaahi, waa tii boqolle lagaga tegi jiray eh sheekhii baa hadlayay.
Dubbe:Iga walla haddaanad iminka iigu dhaaran weligay layma soo mariyeen. Ma sheekhan khayrka Ilaahay siiyay ee dadka caawiya ee dadka u dhexda ahaa ee xataa kuwa dhinta xabaalaha u iibiya ee naxashka iyo xafaajiyada bilaashka u siiya ee Baxsaneba iska fadhiiso yidhi ayaa madaxda aflagaadeeyayay baad leeday. Sheekhu ma sideenuu mafrish jooga bal waxaad ku hadlayso day. Laakiin sawdiga dhaartay. Dee haddaa sheekhu waanu lacagaystay eh ma xagga siyaasadda ayaa loo soo hayaa? Iska daayoo manta waa maalintaynu shahaadda sannadka ee hadalxumida bixin jirnay.
Doolaal:Dee adigu is sii yaa kaa hadal xun adiga.
Dubbe:Waar xukuumaddan dadkuba shahaadaha siinayaan baa kuwanna u baahan ee dhegeyso. Horta sannadkii ina dhaafay shahaadadda waxaa ku gulaystay raggan:
1. Mudanane Daahir Rayaale Kaahin: “Ictiraaf looma baahna ee dhaqaalaha ayaa ka muhiimsan” buu yidhi markuu Kuwait waxoogaaga ka soo qaatay sheekha. Mar kale oo uu is lahaa Budhcadbadeeda ayaa lacag lagu heleyaana wuxuu ku yidhi nin gaal ah oo waraystay oo weydiiyay inuu shirka budhcadbadeedda ee Nairobi kaga hadli dooni qaddiyadda ictraafka Somaliland. “maanta ma aha maalin calan iyo safaarad iyo waxaa laga hadlo ee budhcad badeedda ha nalaga caawiyo.”
2. Mudane Siciid Sulub: “markaanu Axmed Siilaanyo rasaasaynay ayay nabaddii soo noqotay.” Ayuu BBC da ka yidhi maalintii 15May ee madaxda Kulmiye la tacshiiradeeyay. Markalena wuxuu yidhi. “SNM dadkii ay laysay baa loo haystaa.”
3. Cali Warancadde: “Daahir Rayaale distoorka ha loo furo mar saddexaad oo aan Djibouti ku dayano.”
4. Cawil: “Isaaq wuu is dilayaa haddii Daahir Rayaale la dooran waayo.”
5. Jamac Biin: “rag baa sidoodii kabaha afka ku qaadi.”
6. Qanayre Afrax, waxaan u jeedaa Maxamed Cabdi Daud: “Guddidayada Nabadgelyadu waa Distoori mar haddaan guddoomiye mid ka noqday.”
7. Xaaji Cabdi Waraabe: “Habar Jeclooy haddaad caddaalad rabtaan horta dhinta, Aakhiro ayay caddaaladi jirtaa.”
8. Idrisi Kiiloo: “Adhigeena duniduba ma rabto oo waa toban kiiloo.”
9. Ina Saleebaan Weyne: “SNM kubka iyo bawdada ayaa lagaga jabay.”
10. Oday,Garaad Xaabsade: “Meeshatan wax la kala doortaa haddeer ma jiraan.” Mar la weydiiyay xisbigee ayaad ku biiri doontaa.
11. Ina Dhoolayare(beeraha): “sidii gafanaha ayaanu uga soo go’nay hantidii umadda.” “Kumanaan jago ayaa la lunsaday oo Ina Rayaale bixiyay ee Ciidagalow maxaa jagadaydan yar ee Masalaha iigu qabsanaysaan?”
12. Cirro: “Kulmiye ayaa Guurtida qarxiyay.”
Posted by Daljire at 8:37 AM 1 comment:
Dubbe:waa ayaamahii khayrka badnaa ee xajka ee bal inoo duceeya. Wasiirkii dhintay marxuum Qasim Sheekhna faataxada u mara. Aamiin.
Doolaal:Halkaa ku jooji haddaba. Iska qayil oo wax kale ha odhan.
Dubbe:Waa talo wanaagsane wax badan odhan maayee Somaliland baan waxooga yar weydiina. Tolow mise waan u sheegayaa? Mooji. Adigu kollay waxoogaa yar oo aan sidaa u sii ridnayn baan odhanayaa.
Doolaal:Ciidda dabadeed la sug dee. Mise waad fatahaysaa haddaad yar aamusto?
Dubbe:Ii kaadi. Horta Somalilandey maalin intaa qaadka iska yar deyseen casar maqaaxi ma soo fadhiisateen idinkoo dhawr ah. Magaaladii dad aydaan arki jirin iyo dumar qurux badan oo lugaynaya iyo carruur iyo caalam kale oo aydaan laba socon ma aragteen?
Doolaal:waxbaa arrintaa ka jira eh.
Dubbe:ii kaadi. Koob koob caano leh markaa ka tuurteen wax mays yar weydiiseen? Waxa dalka ka jira ma yar taataabateen? “biyo meel godan bay isugu tagaane” hadalkii Ina Rayaale ma idiinla galay? waxoogaa ma qaadaa dhigteen siduu dalka u baabiiyay sida aanu todoba sanadood oo uu Madaxweyne ahaa waxba u qaban? Ma yaabteen oo ma isweydiiseen waxa uu haddana doorasho ku doonayo?
Doolaal:Haye. Waa markeenee. Ma isku qaadday halkaagii?
dubbe:aan dhameeyo. Ii kaadi. ma tilmaateen sida aanu weligii run u sheegin haddana illayn waa madaxweyne oo ma ka xishooteen oo beenaale ma ku odhankari weydeen? Ma soo qaadeen sida uu hantidii umadda u xaday ee ugu tagri falay? Haddana illayn waa madaxweyne eh ma ka xishooteen inaydin tuug ku sheegtaan? Weliba ku darso oo mid idinka mid ahi ma idin xusuusiyay inuu Faysal Cali Waraabe yidhi weliba qoyskiisuna dhankaa waa kala mid. Ilayn maydaan qayilin oo waa miyir qabtaane,ruuxuna waa qof dumar ahe, xantana waa yara hayseene, sidii waxaan maqlayn mayska dhigteen? Hareeraha intaa eegteen, xxxmmmm ma kaga baxdeen?
doolaal:Bal afxumadooda eeg?
dubbe:Ii kaadi afkaaga jago lagu qabay eh. Weliba mid shacabka ahe. ... wax Allah wax kale oo doorasho ku doonayo markaad weydeen ma laydiin sheegay inuu yidhi. “Isaaq waxba isuma oggola markaa intaan isku diro karana waan isku diri inta kalena lacag baan ku iibsan.” Dabadeed ma yaabteen? Intii reer Awdal ma ka yar khajishay ninkaa sida loo wanaajiyay iyo waxa laga sheegayo. Idinna ma tidhaahdeen waar waxba ha ka xumaanina illayn dadkaa ula siman tihiine. Dabdeed Inankii shaaha maw yeedheen oo xisaabta ma weydiiseen? Aan kacno ma tidhaahdeen oo fadhiya ma laydin yidhi.
Cawil ma soo yar qaadeen. Markuu leeyahay cashuur baanu guraynaa nala eega. Tii hore halkuu geeyay ma is weydiiseen. 2% kii Dhulbahantaha loo guray ma soo qaadeen. Ma yaabteen indho adkaantiisa.sidii Sheekh Cali Ismaaciil (AHN) ee ma tidhaahdeen. Weeyaane,ka ku soo dirayna tuug weyn. Weeyaane adiguna tuug yar.
Doolaal:waar naga qabo taleefnka dhacaya ee na wareeriyay.
Dubbe:Malaa Ahmed Quick Brown Fox. Waar waa isagii oo sheekadii yaa iiga horreeyay intii ka hadhsanayd doonayee. Hallo! Hallo! Haa. Waar waxaan ku idhi beytariga iga dhacaya, qoladanna sheekaan u waday markaa iyaga waan u dhamayne aan adiga tii hore kuu dhameeyee sidaan kuu sheegay Ina Rayaale haddaad u tagto qofkii kaaga horreeyay hadalkiisa ama fixilkiisa ama wejigiisa ayaad ka garan.
· Haddaad u gasho isagoo khaanadda sare ee miiskiisa gacanta bidix illaa suxulka kula jira iyo dhawr bacood oo qurux badan oo dhulka yaalla, Jiciir, maayarka Hargeysa ayaa kaa horreeyay oo waxoogaa kharash ahaa oo is biirsaday intuu maqnaa keenay dhawr hadyadoodna debedda ka keenay. Ha ku raagin tiara ku taagane.
· Haddaad maqasho isagoo leh “ahmedow, u sheeg ninkaa kabaha uu gashan yahay mid baa tii dumarka ah. Tiisii kale qolka fadhiga dumarka ee dusha hortiisa ayaan ku soo dhaafay markaan soo degeyaya. Maxamed Muse Diiriye, maareeyaha TV “Qaranka” ayaa kaaga horreeyay.
· Isagoo leh haddaad maqasho “kan isaga yaa yidhi Dhulbahante wax nooga sheeg. Dhulbahante haddaanu doonayno inaanu wax ka ogaano qaar iyaga ah maanu waynay.” Waxa kaaga horreeyay Wasiiru Dawlaha Caafimaadka Ina Shire.
· Hadduu yidhaado “wadaadnimoy ba’?” waxaa kaaga horreeyay Sheekh Axmed Furre, Gudoomiye ku xigeenka Guurtida.
· Haddaad maqasho isagoo leh. “ma maclaamad quraan buu moodayaa xisbiga. Waa maxay carruurtan uu soo ururriyay. Waa inaan dumarka u sheegaa arrintaa caawa.” Cali Gunnimo ayaa kaaga horreeyay.
· Hadduu yidhaahdo “shahaadad doon badanaa sawnagii qaar horena siinay.” Suldaan Xiiray baa kaaga horreeyay.
· Haddaad aragto isagoo sawir miiska u saran eegaya oo qoslaya oo leh. “wallaahi inaan Maxamed Qanyare Afrax laga garan. Tolow sidiisiina maw iimaan la’ yahay?” Badhasaabka Hargeysa , maxamed Cabdi Daud ayaa kaaga horreeyay.
· Haddaad aragto isagoo cidhibta dusheedana balastar iskaga dhejinaya oo leh. “sawkuwii lahaa Kulmiye Guulwadayaal ma leh. Kani muxuu ahaa kabaha naga jaray” Cismaan Hindi baa kaaga horreeyay oo qonofka kaga joogsaday isagoo isla sawiraya.
· Hadduu yidhaahdo “bal tuuggan yaree ii arbaca-arbacaynaya ee beenitii aanu dadka u wada sheegaynay aniga iila yimi eeg.” waxa kaaga horreeyay Idris, Wasiirka xoolaha.
· Haddaad maqasho isagoo leh “waxba ma leh. Ilaahay dembayadoo dhan wuu dhaafaa. Maruunbuu Xajka tegi.” Waxa kaa horreeyay Maxamed Macali, Wasiiru dawlaha Gudaha.
· Haddaad maqasho isagoo leh “tolow naanaystii ay kan u bixiyeen maxay ahayd. Sac gartay ee wixii kale muxuu ahaa?” Cismaanka Dumark la shaqeeya ayaa kaa horreeyay.
· Hadduu yidhaado “aniguna Afhayeen baan u magacaabay isna Cunohayeen buu ku darsaday illayn wakan hablaha yaryar cunaha qabanayee.” Siciid Caddaani baa kaaga horreeyay.
· Hadduu yidhaado “tolow dhengaddii uu odhan jiray waan la dhacayaa halkuu kaga yimi.” Cali Guray baa kaaga horreeyay.
· Hadduu yidhaahdo “sidanaabu iigu shaqaynayaa fiicane maxay haddan mucaaradku ku jecel yihiin? Cajiib!” Mu’addinka ayaa kaaga horreeyay.
· Hadduu yidhaado “ma booskii Oodweynaa wuu soo socdaa uun oo ii dhiibtaas ayuumbuu hayaaye” jago ayaa madax martay oo uu ku halmaamay ee wuxuu u jeedaa “ma Buskii Oodweynaa.” Waxa kaaga horreeyay xildhibaan Obsiiye,(Gacan)Guuritida ah oo uu waxba deeqsiin waayay.
· Hadduu yihaahdo. “kani markuu gabyayo ama uu ii codaynayo ayuumbuu miyir qabaa” xildhibaan Dheeg baa kaaga horreeyay.
· Hadduu C/lahi Darawal kula caayo Suldaan Barre ayaa kaaga horreeyay.
· Hadduu yidhaahdo “waar ninka sheekadiisu xumaa. Waxaan dilkii C/rashiid Cali Sharma-arke ahayn miyaanu aqoon. Madaxweynayaasha miyaa madaxweyne la dilay looga sheekeeyaa” Ina Saqadhi(taliyeMooge) taliayah Booliska ayaa kaaga horreeyay
· “ha iska tabar darraadee waa nin wanaagsan” isagoo leh haddaad maqasho wasiirka diinta iyo Awqaafta ayaa kaaga horreeyay
· “ Baarqabada Kulmiye ayuumbuu ku dhex dhuumanayay ee fariidnimo kalama iman kani’ isagoo leh haddaad maqasho Cabdi Haybe, wasiirka Caafimaadka ayaa kaaga horreeyay.
· “Waa runtiisa Somaliland jiri mayso oo waa lagu kala dareeri haddii...” isagoo waxaa dhuraya haddaad u gasho Cali Gabiley ayaa kaaga horreeyay.
· Xaaskii Ina Cigaal iyo siday guriga uga bixi weyday berigii marxuumkii geeriyooday iyo waxaa haduu kula galo Xildhibaan Dable ayaa kaaga horreeyay.
· haddaad maqasho isagoo leh “hawkii la lahaa Cumar Carte baan dhirbaaxay C/raxmaan Tuurna makarafoon baan ka qaaday Saleebaan Gaal muu ka baqayaa” Cabdillahi Dheere, xoghayaha Guurtida ayaa kaaga horreeyay.
· “ma ka waxan oo carabi ah iyo arrimi ah soo qoray ee odhaahdii ahay “UDUB waa Daahir Rayaale, Daahir Rayaalena waa UDUB” bixiyay ayay xabaal duntay ku sheegayaan.” Rashiid Buur baa kaaga horreeyay.
Ah. Wakaa iga go’ay anigoon dhammayn. Waa inoo qoraalka kale.
Posted by Daljire at 6:22 AM No comments:
Yaa iiga Horreeyay
Dubbe:...Ukaadi,ukaadi. Waar bal intaynaan muranka gelin horta aan laba arrimood is dhaafino. Waa mide waa ayaamahii khayrka lahaa ee bisha xajka ee KU-xigeenkii sheikh Axmed Yusuf Yasiin In Ilaahay Caafimaad sareecanna siiyo oo nabad ku soo celiyo maxaa tidhaahdeen? Ha samaatoo ha la helo. Aamin. Haa dee illayn siyaasaddu inay bahalo inaga dhigto oo dadnimada inaga kaxayso maaha eh. Waa ta labadaade weligayba xafladahaan ka habsaamaaye jaamacadda Timacade ee Gabiley laga furayna hambalyo iyo bogaadin ayaynu u diraynaa haddaynu mafriska nahay ee haynaga guddoomaan. Waa ta saddexaade duco guud inoo wada duceeya in Ilaahay dad iyo dal iyo duunyaba inoo barakeeyo oo cidhib khayr leh inaga reebo. Maxaa tidhaadeen? Ha samaatoo ha la helo. Ku rid fooxa. Daaqadahana inaga yar fura. Nebiga ku salliya. Alaahuma salli wa sallim wa baarik caleeh.
Doolaal:Waaryee waa maalmaalintii uu suufiga noqon jiraye. Tolow muxuu isla wanaajinayaa manta.
Dubbe:Haddaba aan iska bilaabanee waxaan idin weydiiyay. Ninkan sheekha ah ee markii Komishan cusub la magacaababa Ina Rayaale Dirirdhabe ka keeno ee iminkana Ina Cambaro yar sido uuni muxuu ahaa? Me sheekhii berigii doorashadana wax akhriyi jiray baa?
Doolaal:Ma sheikh maxamed baad sheegaysaa?
Dubbe:Waar anigu wax kale garan maayee bal sheekhaa ha lays weydiiyo oo Komishanka wuxuu ka qabto ha lays weydiiyo oo Ina Cambaraya waxa ku maray ha lays weydiiyo oo wuxuu akhriyayo ha lays weydiiyo.
Doolaal:Waar waa caadi sheekho. Waa iska caadi weeyaan. Ha shakiyin.
Dubbe:Ta kale ee aan idin leeyahay is weydiiya Somalilandey waxa weeyey. Marka la leeyahay xukuumaddii baa nin soo qaban kari weyday siday wax u jiraan? Anigu waxaan qabaa inay xukuumadu qaldan tahay. Waayo markay sharcigii jeebka ku ridatay ee ay caddaalad darro joogta ah ku kacdo ee kolba lagu yidhaahdo CID da ayaa lagaa doonayaa adigoon waxba samayn, oo ay guddi nabad gelyo oo aan distoorka waafaqasnayni iska kaa xidho dee waxay noqonaysaa in dadku diido. Waxasi saw wixii laga dagaalamay maaha?
Doolaal:haddaan dadku sharciga u hogaansanaan dalku jiri mayo ee maaha in beeluhu rag difaacaan.
Dubbe:Waar ma Jamac Biin oo dhaxanta dhidida ayaa caddalad ah? Wuxuu yidhi. Ma maqlaysay. Waa ninka yidhi. “Nimanka boolisku doonayo marka hore dembi kumaanaan haysan ee markay xadhigii diideen baanu amar diido ku haysanaa.” Haddan dembi lagu haysan muxuu boolisku u soo qabanayay? Ma Taliye Mooge ayaanu weydiinaa isna ha yidhaahdo ma ogiye. Waar dalkan sidan ka daaya waxaa waddaan waanu ognahaye.
Doolaal:maxaanu wadnaa? Waar qabo taleefankan dhacaya. Ma kagiiba.
Dubbe:mee? Aniga kaygu sidaaba uma ciyo eh. Aar bal cumaamadda kor u qaad. Qaadka qaad. Beladu halkuu ka qaylinayaa.
Doolaal:Waakan waakan ee hoo. Go’ye iska daa. Waa lambar debedda ah.
Dubbe:Haa. Lambarkaan gartay. Waa nin dhallinyaro ah oo Ahmed Quick baa lay yidhaahdaa buu yidhi oo xalay buu ila soo hadlay oo su’aalo badan i weydiiyay. Inaan anigu wax walba ogay buu moodayaa.
Doolaal:Muxuu ku weydiiyay?
Dubbe:Wuxuu yidhi inaan imaadaan doonayaa dalka iiga warran. Adigu hadla wayska badnaaye waxaa ugu door roonaa, waxaan ku idhi qoladiina qurba jooggu markaad timaaddaan kollay Ina Rayaale waa u tagtaane aan dabeecadihisa wax kaaga sheego. “u tagi mayo” buu yidhi. Yeelkee iska dhegeyso baan idhi.
Waxaan idhi markaad u gasho ciddii kaaga horreysay baad ama hadlakiisa ama wejigiisa ama ficilkiisa ka garanaysaa. Waxaan idhi markaad u gasho
· Hadduu Habar Awal kula caayo ama ka cawdo oo yidhaahdo “xaafad halkan ah iyo
labadeeda joornaal baan khaati ka jogaa. Cawil baa kaaga horreeyay.
· Hadduu yidhaahdo Berbera wixii dekedda galbeedkeed ka xiga Adan Ciise cidi kuma weheliso.Kuxigeenkii baa kaaga horreeyey
· Hadduu dumarka Kulmiye iyo xaasaska kulmiye wax ka sheego Cabdillahi Ducaale ayaa kaaga horreeyay.
· Hadduu kuugu dhaarto inaanu jirin nin Dhulbahante ah oo Somaliland aaminsane. Qaybe ayaa kaa horreeyay.
· Haddaad u gasho isagoo kaalkulatar(calculator) ku foorara oo gawdaa ku haya. General Nuux baa kaaga horreyay oo xisaabtii caaglaha ayaa is qaban la’.
· Markaad u gasho haddaad aragto isagoo shandad ku sii riixaya miiska hoostiisa. Cali Xoorxoor baa kaaga horreeyay.
· Hadduu markaad u gasho ku yidhaahdo xoghaynta. “axmedow hadda orodoo inta guri ee dhismuhu ku socdo shacabka soo qor.” Siciid Sulub baa kaaga horreyay oo xisaab qalday.
· Hadduu yidhaado Qof sharciga ka weyni ma jiro waa in la xidhaa iyo hanjabaad. Cali warancadde ayaa kaaga horreeyay.
· Hadduu ku yidhaa waa inoo berri meel baan waxoogaa ka sugayaa. C/raxman Farax sugaal baa kaaga horreeyay.
· Hadduu Habr Jeclo wax yidhaahdo oo ku dhilo Xaji Cabdi Waraabe ayaa kaaga horreeyay.
· Hadduu Maraykan kaaga sheekeeyo oo yidhaahdo Republican ka ayaa inoo wanaagsan oo ina ictiraafayay. Sacad sheikh baa kaaga horreeyay.
· Hadduu yidhaahdo. Axmedow kiniinkii madax wareerkaa ii keen. Jug-soo-dhacay baa kaaga horreeyey oo deymankii xisbiga iyo lgacayowgii crruuraha iyo dadka aaska ka sii dareeray ee la soo duwey ee la yidhi xisbiga ayay ku soo biireen lagu kharash gareeyay.
· Haddaad aragto isagoo fayl buluukiya la taagan. Maxamed Baarjeex baa kaaga horreeyay oo jagadiisii shacabka arjigeedii 250 aad ee uu us oo qortay weeyaan.
· Hadduu Iraan kaaga sheekeeyo iyo sida adhigeena loogu iib geyn karo. Adan Baradho oo beri wefti Rugta Ganacsiga ah ku tegey Iran baa kaaga horreeyay.
· Haddaad u gasho isagoo leh. Bal yaa isagaa waxaa u dirtay? Ina xaaji Daahir baa kaaga horeeyay oo arrimo aan loo diran daf iska yidhi. Mana eryi karo oo Xaaji Daahir buu ka baqayaa.
· Markaad u gasho hadduu wejigiisa qushuuc ka muuqdo iyo farxadi oo isha bidix yareeyo isla markaa aad moodu inuu ku dhaafsiisan yahay. Badhasaabkii Boorame ayaa kaaga horreeyay oo hawshii uu Maxed Case iyo Habar Cafaan ka qabtay iyo siduu u kadeeday uga sheekeeyay.
· Haddu markaad u gasho yidhaahdo. Axmedow(xoghaynta) tigidhka London waa imisa. Axmed Xaashi , wasiir ku xigeenka qorshaynta ayaa kaaga horreeyay.
· Hadduu kaaga sheekeeyo sida loogu baahan yahay in xukuumaddu dhulka ay leedahy ugu baahan tahay inay lacag ku bedelato oo hawlo ku fuliso. Ina Aw Siciid baa kaaga horreeyay.
· Hadduu af Ingriisi kugula hadlo. Cali sanyare ayaa kaaga horreeyay.
· Hadduu ku yidhaahdo ictiraaf looma baahna ee dhaqaale ayaa ka horreeya. Xasan Gadhweyne oo sheekhii Kuwait war ka siday baa kaaga horreeyay.
· Haddaad u gasho isagoo taagan oo jeebka surwaalka oo soo baxay dib ugu celinaya. Buur madow baa kaaga horreeyay oo baadhay.
· Hadduu kuu sheego cidii mafriska idinla fadhiday shalay iyo waxay lahaayee. Ibraahim Yey baa kaaga horreeyay.
· Hadduu yidhaahdo Axmedow lambarkii Muxumed Aw Axmed ii dhiib. Oday Saleebaan baa kaaga horreeyay.
· Hadduu faylkii xisaabta gurmadka dedegga ah dalbado Axmed Daud, agaasimaha Guud ee Maaliyadda ayaa kaaga horreeyey oo u sheegay inaan lacagi ku jrin xisaabtaa.
· Hadduu ku yidhaahdo Kulmiye nin jecel iyo nin neceb ba waa qaran dumis. Xasan Mawlid baa kaaga horreeyay oo ku yidhi. Madaxweyne xisbiyada qaranku waa xisbayadeenii taageerayaashooduna waa umaddeenii oo dad walaalo ah ayaynu nahay.
· Haddaad wax Alla wuxuu ku hadlayo garan weydo oo aad af Xabashi mooddo oo inamo yaryar oo la xidhay oo rabshad waday oo xaafadaha Xawaadle iyo Koodbuur ah,iyo mu’aamarad isaga lagu waday oo la fashiliyay iyo wax la mid ah oo aan sakaaro ka biirsan oo been ah kaaga sheekeeyo. Cabdillahi Cirro ayaa kaaga horreeyay.
Markaan halkaa marayo ayuu yidhi. Waar illayn ninka baastada ayaa ka gubata, muxuu doorasho ku doonayaa haddaa? Maxaad u jeeddaa baan idhi. Wuxuu yidhi. Dhanka qurbaha qofkii wax ma tare ah ee aan waxba lagu hallayn Karin ayaanu nidhaahnaa baastada ayaa ka gubata waayo meesha raga ayaa wax kariya markaa baastaduna inyar bay ku bislaataa biyahana waa laga miiraa ee lama liqsiiyo. Waxaan ku idhi anagu wax ma karinee waxaanu nidhaahnaa “ceesaan ama waxar jabtay lagu aamini maayo qofkaa.”
Posted by Daljire at 8:58 AM No comments:
Odaygii: ee iminkaad meel kale isku qaadiye , gaadhi baa ii soo socda oo i qaadaya eh waxaan ku idhi . haddiiba arrinku xumaado oo wax dhacaan oo geeri loo simane waxba dhacaanba. Dhawr arrimood baan ku sii farayaa. Hortaa inankaa weyn waad ku hadal xuntay ee talada reerka faraha uga qaad oo inuu nin weyn oo 30 jir ah yahay ogow. Qoladii inanta soo doontay markay soo diyaar garoobaan dhakhso ugu rara. Ninka Cawil la yidhaado ee wasiirka ah lacag yar oo ku raagtay oo kaga hadhsanayd mooshinkii hore inanka muxumed uga dir oo ta mooshinkana soo raaci dheh. waa mid labaduba go’anyihiin oo Madaxweynaha wuu ka soo qaadaa anagana nama soo gaadhsiiyo eh. Baloodhkii ilma Siciid Cabdi dhankan bari ka xigey file-kiisi shalay baan xoghaynta madaxweynaha u geeyey. Mooshinka dabadii baan saxeexayaa ayuu yidhi. Isna ka soo qaada. Waxa kale aan idinkala ballamayaa. Kursigaasi yuu wareegin. Nin wal oo golahaa ka baxayba inankiisii baa bedelay. Inankaa muxumed kursigaa ha ku fadhiisto. Waxa la odhan da’daadu waa intee? Yuu odhan waa sodon oo runta sheegin ee 45 inuu yahay ha ku dhaarto....
Posted by Daljire at 3:44 PM No comments:
“Wax Isweydiini Ma Xumee.........”
DALJIRE - “Wax Isweydiini Ma Xumee.........”
Dubbe:Horta bal dadkii Ina Rayaale laayay faataxada u mara. Ku dhaawacanna u duceeya. Aamiin.
Anigu waanigii ramadaanta noqon jiray suxufiga ee waraysiga Ina Rayaale la yeelan jiray. Markaa doorkan isgaaba shir jaraa’id qabtay oo Allaba waa sahlay...
Doolaal:Waar iminkaad Ina Rayaale isku qaadiye qoladan Ina Xaabsade ka daba hadashay ma idinkaa soo abaabulay?
Dubbe:Waar noo kaadi ninyow maalin ina xaabsadadahan maalin walba sii saqiiraya laga hadlo ma joognee.
Dubbe:Ina xaabsade arrinkiisu waa kii islaantii Majeerteen ee ganacsata ahayd ee Dubai tagtay oo kale.
Dubbe:Dubai bay safar ganacsi ku tagtay markaasuu askari laanta socdaalka ahi madaarka ku weydiiyay baasaboorkii. Way u dhiibtay. Wuu kala furay. Kaan imi,xisaab miidhan baa ku qoran, sawirkeediina kuma yaal. “eesh haadaa?” (waxani waa maxay?) buu su’aale. “Heedhe bal du’.” Bay tidhi. “Waar waa la ba’ay. Maandhow iska keen kaasi waa kii xiisaabtu iigu qornayde. Waakan kii saxa ahaa ee fiiri.” Bay tidhi intay mid kale u dhiibtay. Iminka Ina xaabsade intuu aamusnaa aamusnaa ayuumbuu isla kacay oo yidhi. “sida Dastuurku dhigayo madaxweynaha xil-ka-xayuubin laguma samayn karo sanadkiisa ugu dambeeya xilka.” Markii la weydiiyay na tusna, distoorkii Puntland ayuu soo dhuftay. Markay la yidhi waa sideena. Sida islaanta ayuu yidhi. “ ‘aar ma la ba’ay. Waar iska keen waa kii Puntiland eh. Belayaada jeebkan kale ayaan ku ogaaye kan yaa ku riday? Ma gabadhii dharka ii dhaqday. Mindha kii Fadaraalkana jeeb qaldan bay iigu ridday heedhe? Fanto ku dishay waa na kashiftay ay.”
Doolaal:idinku ninkii idinka soo horjeesta waxba u reebimeysaan dee.
Dubbe:Waar aan war saxaafadeedka kuu wadnee dhegeyso. Su’aalaha dhegeyso.
Doolaal:maxaan dhegeystaa Madaxweynuhu su’aalo in la weydiiyo wuu diiday eh.
Dubbe:Yeelkee dhegeyso anigu waan qortay su’aalahayga ee isgaa ka cararay eh. Anigu dadkaan u sheegayaa. Sidan bay u dhaceen:
1. Madaxweyne, shir saxaafadeed baad qabatay wax cusbna maad sheegin ee eedaynta mucaaradka iyo wakiilada ayuumbaad ku dheeraatay, wax niyad wanaaga maad muujin, hadal wanaagsan oo soo jiidasho leh maad odhan. Cuqdad iyo daciifnimo ayaa kaa muuqatay. Maxaad u qabatay shirka ee muraadkaagu ahaa?
2. Berigii hore markaad muwaadiniinta layso waxaad odhan jirtay “ciidanku qalabka ka -hor -tagga mudaharaadka ma haysto ee xabbad nool buu ridayaa. Hadda qalabkii waad heshay oo illa suntii qiiqa waad haysaa ee maxaad dadka u laysay ee aad xabadda nool ula dhacday?
3. Dhallinta waxaad tidhi “ nin kursi doonayaayi yuu idiin soo saarin xabbadda..” iyana waxay leeyihiin “nin kursiga ayaan khasab iyo xabbad ku haysanayaa leh sida Rayaale ma oggolin.” Sidee isugu keenaysaan?
4. Waxaad tidhi “dhiiggiina difaaca qaanka oo qudha u daadiya.” Difaaca Distoorko miyaanu difaaca qaranka ahayn?
5. Waxaad tidhi. “waxaan micno lahayn ha ku dhimannina oo haw soo bixina.” Haddaad ogtahay inaanu macno lahayn maxaad dadka ugu laynaysaa waxaan macno lahayn?
6. Waxaad tidhi. “tuug baanu laynay markii mudaharaadka.” Haddii tuug la laynayo waxa la leeyahay adiga tuug kaa weyni ma jiro oo qarankii oo dhan baad ku tagri fashay ee maxay askartu kuu dili weyday adiga?
7. Had iyo jeer waxan kaa maqlaa oo aad ku faanta “Shirguddonka Wakiilada anigaa berigii u tanaasulay bay ahayd oo u ogolaaday inay noqdaan shirguddoon” maxaa faanka beenta ah kuugu wacan illayn golaha mucaarad baa aqlabiyadda haysta oo cod ku doortay sida nidaamku yahay eh? Ma beentaadaad rumaysataa?
8. Had iyo jeer waxaad tidhaahdaa “albaabkaygu wuu furan yahay” hadddaba haddii marka albaabkaaga laga soo galo ee lagula xaajoodo aad laba isku darsatay. 1) inaan waxba kaa go’in iyo 2) inaad wixii lagu heshiiyo ka baxdo oo aanad cahdi lahayn maxaa baasee albaakaaga laga soo doonayaa? Ma kuraasidan xun xun ee aad sidii islaamaha bacda ku xidhay ayaanu daba dhididkooda wax ku falaynaa?
9. Haddaad nin talo oggol tahay sidaad ku andacooto, adigoo weligaaba diiwaan gelin isku dhejinayay oo lahaa waa sharci haddii aad isku qancisay inay diiwaangelintu qaldan tahay maxaad dadkan talada kula leh ugu yeedhi weyday ee aad u odhan weyday sidan baan wax u arkaa ee maxaynu yeelnaa ee inoo dan ah? Miyaanay taasi munaafaqnimo ahayn?
10. Had iyo jeer caalamaka ayaad wax nooga sheegta. Ta u dambeysay waxaad tidhi. “baarlamaanada caalamku way si dilaan oo waa caadi.” Miyaad aragtay weli baarlamaan askar loo soo diro oo laga qufulo golahooda? Ta kale caalam maad arag, waxna ma akhridid, laba goor baad debedda u baxday oo marna lacag aad naga xadday baad ilko ku soo gashatay marna dumar tuweysaya ayaad London ku soo daawatay waa maxay caalamkan aad nooga sheekaysaa horta? Waxaan ilaabay markii kale ee Djibouti baasaboorka u doonatay.
11. Waxaan maqlay beri baa Xaaji Cabdikariim Xuseen(waraabe) ilaahay caafimaad ha siiye, qolo Habar jeclo ahi u tagtay oo caddaalad xumo lagula kacay reerka uga cawdeen. Wuxuu ugu jawaabay. “Habar jeclooy haddaa caddaalad doonaysaan horta dhinta. Aakhiro ayay caddaaladi jirtaaye.” Iminka Ina Rayaalow saw arrinkaagu maaha haddaa caddaalad doonaysaan horta xabaddayda u soo badheedha?
Doolaal:Waar naga daa waxaasi su’aalo maahee. Sheeko kale keen. Waa maxay qabyaaladdan iyo afxumadan aad suxufiga ku sheegaynaysaa?
Dubbe:Albaabkaygu wuu idiin furanyahay ciddii su’aalo dheeraada rabta. Anigu ma waxbaan dhimay sidaan wax u arkayay ayuumbaan sheegaye. Waar bal kaalaya...
Posted by Daljire at 4:20 PM No comments:
“Haddaan Dhergo maba tago”
Daljire - DALJIRE
Dubbe:Horta nimanyoo waanigii Ramadaanta qaadka iska deyn jiray ee mafrishkana fasixi jiray laakiin markaan arkay cid kale iska daayoo Guurtidii oo fasax tegi weyday ayaan anna idhi mafrishkii xidhi mayo oo kalfadhi aan caadi ahayn baynu gelaynaa, codna loo qaadi maayo. Bal horta aan daaqadda inaga xidho.
Doolaal:waar sidaad leeday? Ha nagu xidhin daaqadaha waa kulayle. Taraawixiidii baanu ku soo yar kululaany eh. Halkuuse qiiqa sigaarku ka baxayaa haddaad nagu arjunto meesha?
Dubbe:waar u kaadi waxba ma ogide meeshu waa waddo eh.
Dollaal:oo waayo hadday tahay? Sawtii weligeedba ahayd ee daaqadahu noo furraayeen.
Dubbe:waar dumar baa meesha mara nninyow.
Doolaal:Muxuu ku hadlayaa? Oo hadday maraan waayo.
Dubbe:Sawtan la yidhi dumar askar wata oo Madaxtooyada ay saaxiib yihiin ayuumbaa daf ku soo odhanaya oo kan ii xidha ayuumbay odhanayaan Daahir buu sawirkiisa ka sii jeestay ama wax ku yidhi dabadeedna meel aad martay lagu arki mayo. Ta kale waxaan garan waayay marka la leeyahay “dumar mataxtooyada la saaxiib ah” waa maxay? Side madaxtooyada dumarku ula saaxiibaan? Wallaahi inaynu UDUB wax walba ka maqli.
Doolaal:Waar waxaad sheegayso garan maynee daaqadaha naga fur.
Dubbe:Horta laba arrimoodba way iga qosliyeen doorkan. Dhallinyaradaa saxafadda ee bixisay ereyga “dumar Madaxtooyda la saaxiib ah.” Iyo maahmaahdii Abiib Timacadde ugu maahmaahay Ina Rayaale ee Haatufna sawir gacmeedka ka samaysay.
Doolaal:Oo maxay ahayd?
Dubbe:Wuxuu yidhi. “ninbaa maqaaxi (hudheel) awlal hilib ah ka dalbaday. Markuu kii liqay ayuu mid kalena dalbaday oo liqay. Lacagtii keen baa la yidhi. “ma hayo, waanan gaajaysnaa” ayuu yidhi. Haddaad mid cuntay oo gaajo kuu geysay lacagna aanad isku ogeyn maxaad ka labaad kuu geeyay baa la yidhi. Orodoo iska tag oo hadaba na dhaaf. Intuu dharkii la baxay ayuu yidhi. “haddaan dhergo maba tago illaa aan .......................”
Doolaal:Ma halkaasaa maraysaan oo waxasaa ku hadlaysaan?
Dubbe:Waxaan ku weydiiyay nimanka odayaasha ah ee xildhibaanada maxaa helay? Anigu rag waaweyn oo sharaf leh ayaan ku iqiine sidee wax noqdeen?
Doolaal:maxay sameeyeen? Haddii meesha laysu joojin waayo saw inuu raggu wax iska celiyo maaha?
Dubbe:Waxa la yidhi wax allaale wixii qaad lagu raro haddu gaadhi yahay, hadduu dameer yahay iyo hadduu dad yahayba wuu ka dheereeyaa kuwa kale ee la midka ah. Iminka bal amarka Ilaahay qof alla qofkii Ina Rayaale arrin la wadaagaa maryahuunbuu dhiganayaa oo odhanayaa “maba tago haddaan dhergo” Bal raggan wada qandaraaska iyo kirada iyo hantida umadda wada jaqaya ee ay ahayd inay iyagu nabadda ilaaliyaan ee iyagii dagaalka abuurya day? Miyaanay Aakhiru samaan ahayn?
Waxa kale oo aan la hadlayaa saddex xildhibaan oo aan aad u jeclahay laakiin beryahan aan waxba ka garan la’ahay oo buuqan uu ku dhex jira. Waxaa idhi:
Caligaa(gabiley) dhako xiir iyo
Dable xoolo-cir-doon iyo
Dar kaloo ka xunoo
Xuunsho soor la wadaag ah
Qalbigaan ka xidhoo
Xanaaq iima hayee
Siduu xaal ka noqday?
Geesigii Axmed Xoor (Weysacadde)
Een xorayntii ogaa
Xaq siduu ugu hiishee
Xabadii ku dhacaayay
Xagluu ay go’an yiin
Xisbi waa la galaayoo
Xor baa loo yahay taase
Kuwii xaabshay boqnaa
Sawkan xeelad ku raacay
Ee fulinaaya xumaanta
Huruuf way ku xantaane
Wejiguu yar xabuuso
Qofaan xaalad aqooni
Xanaaq buu u tirshaaye
Xuseen waa oday weyn(xuseen ismacil)
Waa xabiib dadwedeen ah
Xisaab wuu ka batee
Sawtan xaajo ka hoostay
Uu Sidii qaalin xumaaday
Oo xagaa dib ka qooqay
Nin xurmeeya dadkoo
Xanaanshoo wax taro
Xariir oo gob ahoo
Xishoodaan ku iqiine
Sawkan xaytay maryaayee
Xayadii ka tegee
Xunbaduun qubayee Xadhkihii jarayee
Xeerarkii ka gudbay
Doolaal:iska dhaafoo waxaasoo waataa afka gacanta geliseen ee dunidaay na soo gaadh lahaydeene horta ma laydin yidhi Rayaale la bedeli maayo ee sheeko kale keena. Maxaydin yeelaysaa iminka?
Dubbe:’aar anaga taa cidi nama odhan kartee. Maxaad u malaynaysaa dhexdhexaadinta Guurtida iyo Salaadiinta?
Doolaal:Oo maxaad qoladii kale ee saxaafaddu abaabushay uga tagtay?
Dubbe:qolada saxaafaddu iyagu waxay la kulmaanba waa dhexdhexaad eh bal adigu maw malaynaysaa Xaaji Cabdi,Gacan,Muxumed Aw Axmed iyo Dheeg baa dhex noqonaya? dee waa haddii dameero geel dhalay la arko. Ta kale markaanu Ina Suldaan Cabulqaadir,Buro-madow iyo Dakharre ergo dhex ah u qaadanayno maanu Cawil,Cirro iyo Jaamac Biin ergo u qaadano. Ma waxbaa noo dhiman.
Doolaal:Oo maxaad u deedafeynaysaa haddaa ma ku macaaradka ah ayaa dhex noqonaya?
Dubbe:waar horta anigoon adayaasha xumaanba oga jeedin haddana nin aan maalin qudha sidii Ilaahay u abuuray dhex noqoni siduu dhex u noqonayaa waa yaabe? Miyaanay su’aal meesha ku jirta ahayn adeer.
Waar dee haysu kaaya dhegeysanina ee nook ala fura maragga.
Doolaal:Wax kale ma haysaa?
Dubbe:Haa oo waxaan hambalyo u dirayaa taageerayaasha labada xisbi ee Kulmiye iyo Ucid ee sida nabadgelyada ah u soo baxay iyo ciidanka Booliska oo doorka koray. Imisaanu lahayn waxba dhici maayaan haddii xukuumaddu xabbadda joojiso.
Waa inoo maka xiga haddii eebe idmo.
Posted by Daljire at 5:36 PM No comments:
Hal laba ku dhufo
Dubbe: Ma maqashay maahmaahda la yidhaa “hawraareey ninna si kuu yidhi, ninna si kuu qaaday?”
Doolaal: That is called misunderstanding. Is maan dhaaf baa la yidhaa.
Dubbe: Waa markeenii. Weligaabaad markaad maqasho gaalo weftiya ayaa timi ama soo socota aad Ingriisi sheekheedu dhintay oo daxalaysatay ugu tijaabin jirtay aniga.
Doolaal: Go ahead. Muraadkaaga sheego Ingriisida waa la bartaaye.
Dubbe: Horta wax barashadaasaan ku xusuustaye waxa la yidhi oday Ina Cabdi Xaabsade oo ka mid ahaa raggii iyagoo fardo fuushan oo qoryo sita iskuulada la qoray baa macalinkii xisaab u dhigay oo yidhi. “hal laba ku dhufo.(1x2) markaasuu ku jawaabay “dee ku dhuftay oo afar qaaday ee maxaad ka sheegey aad.” Hal laba dhengadadood gogga u geli buu mooday. Is maan dhaaf baa la yidhaa. You understand?
Doolaal: The camel boys are stupid and cruel. They beat the animals. Geeljiruhu waa xayawaan. Xoolihii bay ul la dhacayaan. Inay naf leeyihiin miyaanay ogeyn
Dubbe: Bal ka cid stupid ku sheegaya eega? Waar dhegeyso. Mid yaroo isna ciyaalo iskuul ah oo ololahii reer miyaga loo diray baa odayadii uu wax u dhigayay isagoo u jeeda qora, yidhi. “koofiyad dhig.” Waa iska bixiyeen oo dhulkay dhigeen. “cimaamad dhig.” Waa dhigeen iyana. “shaadh dhig.” “waar ma reer baynu oodaynaa intay yidhaadeen bay iyana bixiyeen. Markii dambe ayuu yidhi. “macawis dhig.” “aar kani macallin maahee inaga keena bay yidhaahdeen oo dareereen. Intaana waanu garan weyney.
Doolaal: what you mean? Maxaad uga socotaa iminka?
Dubbe: waxaan uga socdaa bal dalkan dhan ee cid cid af garata laga la’ yahay ee kolba Ina Rayaale dhan u tukinayo eeg. mar wal oo wax qaso anaguna waxaanu u qaboojinaa arrinta dalka iyo dadka wanaagooda ka taliya isna wuxuu u qaataa inuu naga adkaaday oo kibir baabu ka sii qaadaa. Iminkana Jamac Sweden kii digaagadda cunay ayaabu helay oo markhaati beenaale la garab taagan. Haddaba horaan wax walba u dhignay oo wax dambee oo aanu dhignaa naguma hadhin ee waa halkii Ina Cigaal eh (AHN) “qaawanaanta ayaynu isku arkaynaa.”
Doolaal: What chicken? Jaamac Sweden ma xoor baa waa maxay digaagaduu cunay?
Dubbe: Haddaanu xoor ahayn waa maxay baalashan digaagga ee afkiisa ka soo jeedaa? Horta Jamac Sweden iyo magaca Peace la yidhaa ee gaaladu wadato laysma tuso. Beri buu ka shaqayn jiray hay’ad la yidhaahdo Life and Peace oo gaalo leeday. Musuq buu dabada u qabtay. Xisaab celin buu soo dallacay. Gaalkii baa hal laba si kasta ugu dhuftay oo xisaabtii baa is qaban wayday, ama aan idhaahdee, afar qaadi weyday. Dib buu ugu soo celiyay. Mid ka daran buu haddana jaamac soo dallacay. Gaalkii baa waraaq Nairobi uga soo qoray sadar keli ah. Wuxuu yidhi. “Dear Jama; please eat the eggs but do not eat the chicken.” (beedka cun jaamacow oo digaagadda ha cunin) Haddaba tii buu Interpeace na ula yimi.
Doolaal:Which comes first, the chicken or the egg? Keebaa dunida ku soo horreeyay ma beedka mise digaagadda? Waar qoladiinan mucaaradka ahi doorasha soo gala haddaydin wax isla haysaan hadalka iska daayoo
Dubbe: Waar muxuu ku hadlayaa wuxuu? Halkeed inoola kacday? Horta eraygan mucaarad cid gaar ahi ma leh. Anagu xukuumadda ayaanu mucaarad ku nahay idinkuna golayaasha baarlamaanka ayaa mucaarad ku tihiin ee la soco. Doorashadana Ina Rayaale runta maruun u sheega oo waxaad tidhaahdaan Mugabe ma tihid, Ismacil Cumar Geele ma tihi, Meles Zenawe ma tihid ee wixii inoo wada dan ah yeel oo diiwangelinta yeel.
Posted by Daljire at 3:59 PM No comments:
MINDFUL of the vigorous campaign led by the patriotic organisation, the SNM, which culminated in the reassertion of (our) independence which was achieved through sacrifice of life and property so that the nation can enjoy a governmental system which meets its needs;............. Continue here
Shahaadad Shiqib By A. Geeljire Dubbe iyo Doola...